Morocco: Kumanaan ka mid ah macalimiinta "qandaraasyada" ayaa joojiya shaqo joojinta - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY Morocco: Kumanaan ka mid ah macalimiinta "qandaraaska" ayaa shaqo joojin - JeuneAfrique.com
Morocco: Kumanaan ka mid ah macalimiinta "qandaraaska" ayaa shaqo joojin - JeuneAfrique.com
"Heshiiska weli haysta xaaladda rasmiga ah" ee Wasaaradda Waxbarashada, laakiin digay "isuduwidda macalimiinta heshiiska" war qoraal ah oo wariyeen goobaha news Medias24 iyo Al Yaoum 24.
Sida warbaahinta isku midka ah, macallimiintu waxay go'aansadeen in ay shaqadooda joojiyaan Isniintii, halka kulan cusub oo wasaarada la qorsheeyay la qaban doono April 23. Natiijo ahaan, shaqo-joojin cusub ayaa la bilaabi karaa April 25, wuxuu ku daray isku-duwidda.
Shaacinta uu yimid ka dib markii kulan uu dhexmaray wasaaradda waxbarashada, ururada macalimiinta iyo wakiillo ka socda macalimiinta xoogbadan, by a dood "halis" "mas'uul ka ah" sida lagu sheegay war wasaaradda ku calaamadeysan.
Dhammaadkii kulanka, wasaaraddu waxay ku dhawaaqday inay go'aansatay inay "joojiso dhammaan talaabooyinka maamulka iyo sharciyada ee looga soo horjeedo" macallimiinta wax ka dhiga. Macallimiintu waxay muujiyeen "dadaalkooda ah inay dib u bilaabaan shaqada Isniinta 15 Abriil" kulankaan, waxay hormariyeen Wasiirka Waxbarashada.
Macalimiinta 55 000 ku lug leh
Kusoo dhawaaday dhaqdhaqaaq isdaba jooga oo ay weheliyaan dhacdooyin muhiim ahDhammaadkii Maarso, Wasaaraddu waxay soo saartay nidaam looga eryey "sii deynta boostada" si ay uga dhaadhiciso kumanaan macalimiin shaqo joojin ah si ay shaqada ugu noqdaan.
Dhaqdhaqaaqa wuxuu ka hadlaa macallimiinta 55 000 ee ka shaqeynaya 2016 iyada oo ku saleysan heshiisyada muddada go'an (CDD) ka dibna lagu dhex daro Dugsiyada tacliinta ee gobolka. Waxay sheeganayaan xaaladda shaqaale rayid ah ee Wasaaradda Waxbarashada Qaranka. Waxay leeyihiin mushahar isku mid ah kuwa kale - 5 000 dirhams bishii (ku saabsan 460 euros) - laakiin ka cabso inayan ku raaxaysanayn isla xuquuqda, gaar ahaan qorshaha hawlgabka.
Dhammaadka Maarso, bandhig weyn oo macalimiinta qandaraaska ah ka hor Baarlamaanka ee Rabat ayaa waxaa kala qaybiyay booliska iyada oo gacan ka geysaneysa biyaha biyaha.
Qaar ka mid ah ardayda 300 000 ayaa ka maqnaa maqnaanshaha macalinka, dhawaan ayaa sidaas tidhi Wasaaradda Waxbarashada Siciid Amzazi.
Pope Benedict XVI hore wuxuu bixiyaa sababaha fadeexadaha xadgudubka jinsiga ee kaniisadda
"Mukete waa kii ugu sarreeyay, muxuu sameeyey si uu caruurtiisa ugu soo celiyo dareenkooda? "